Barruu Gabateetti jijjiiri
Barruu filatame tokko gabatee tokkotti jijjiira, yk gabatee filatamaa barruutti jijjiira.
Gabatee - Jijjiiri - Barruu Gabateetti filadhu
Dirqalaawwan kun qaaqa kana keessa kan jiraatan, haalataa jijjirraa irratti hundaa'uudhaani.
Bakka kanatti barruu gargarbaasi
Foo'aan ,kanneen akka caancalaa, barreeffama filame keessaatti mudana agarsiisa. Keewwatootni ati filatte tokkoon tokkoon isaanii tarjaa gabateetti jijjiiramu. Haaluma walfakkaatun, yammuu ati gabatee gara barreeffamaatti jijjiirtu, mallatteessitootni tarjaa gara arfii ati jetteetti jijjiiramu, tokkoon tokkoon tarrees gara keewwataatti jijjiirama.
Tarjaawwan maraaf yabbina wal-qixee
Tarreewwaan ... isa jalqaba
Tarreewwan n warra jalqabaa akka irraantoo tokkootti irra deebi'a.
Gabatee Addaan Hinbaasin
Title is: Barruu Gabateetti jijjiiri